Lifepo4 Battery, Lithium Iron Phosphate Battery - Polymer
Lithium Polymer bhatiri
Simba Turu bhatiri
Cylindrical Rudzi Bhatiri
Prismatic Type Bhatiri
Hunhu Kudzora Maitiro
Battery OEM & ODM basa rakagamuchirwa
Zvichienderana nezvinodiwa nevatengi, timu yeinjiniya yakasarudza maseru, akagadzira iyo BMS, akarongedza maseru, akaita bvunzo. Isu tinogutsa vatengi vedu neyekutendeuka-kiyi mhinduro. Yakagadzirwa Yakagadzirwa bhatiri pack ne LG / Samsung / Sanyo / Panasonic / Sony bhatiri cell.100% Ichokwadi Guarantee. Ndokumbira kuti utibate kuitira BHAIBHERI mutengo pamwe neyako bhatiri mapaki mapurojekiti.
R & D Tsigiro
Semugadziri wehunyanzvi mune anjiniya makumi matatu muPLM R&D timu inosanganisira 5 PHD, 10 MFD uye 15 Bachelors. Anenge makumi matatu eunivhesiti yeA automatic kugadzirwa kwezvinhu, 25 nubit Semi-otomatiki michina uye 8 mitsara yekugadzira mufekitori yedu.
Kusvitswa nenguva: PaPLM tinonzwisisa kuti chimwe chezvinonyanya kukosha zvinodiwa nemutengi wedu ndechekusvika nenguva. Isu tine hanya nekutakura kwedu kufambira mberi zvakanyanya sehunhu hwedu. Yakanakisa mhando: Kuvimbisa zvigadzirwa zviri zvemhando yepamusoro ndiyo yedu yekutanga kukosha. Ichi ndicho chikonzero isu tichigara tichisarudza kuisa mari mune yepamusoro-tekinoroji mhinduro mune yedu R&D nzvimbo. Zvigadzirwa zvakasarudzika: Kusanganisira iro rakatetepa repasi rose simba bhangi, PLM inopa huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro kuti zvisvike mukushanduka kwezvinodiwa zvevatengi uye zvinodiwa. Kwakanakisa basa revatengi: Imwe inogara ichishushikana kuti vatengi vedu vanogovana nesu ndiko kukosha kwevatengi sevhisi nebasa uye isu tinotarisira chero kubvunza chero nguva isati yatanga uye mushure mekutengesa.
Yedu proprietary ShockSpreadTM
Shenzhen Polymer Bhatiri CO., LTD yakavambwa muna 2014, inyanzvi inotungamira lithium ion bhatiri mugadziri ane anopfuura makore mashanu nhoroondo muChina. Zvigadzirwa zvikuru zvinokwanisika bhatiri repolymer, 18650 bhatiri pack, e-bhasikoro bhatiri, lithium bhatiri mapakeji kana chero mapurojekiti akagadzirwa ebhatiri. Tinogona kupa imwe-nhanho mhinduro uye akazara zvigadzirwa kubva kumabhatiri kuenda kumabhatiri zvinhu sezvinodiwa nevatengi.
103450 1800mAh-Smart masasi
Chigadzirwa Chinyorwa: Kushandiswa: Matoyi, Imba Yekushandisa ...
Yakakwirira mhando Yakagadzirirwa 18650-4s 14.8v 3400mAh ...
Chigadzirwa Chinyorwa: Model: PLM18650-4S1P Nominal ...
Mutengo wefekitori UL yakatenderwa 22.2v 900mah kuongorora ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Muenzaniso: PLM-NH2057QE34 Bhatiri ...
CPAP smart bhatiri rine simba kuratidza inovaka mu ...
Kupisa tengesa 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Muenzaniso: PLM-36v20ah Bhatiri Pa ...
Battery fekitori yakananga kutengesa 5000mah 3.7v li -...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Chigadzirwa Sumo yeiyo PL ...
NEI TISARUDZE US
Kubva payakagadzwa, fekitori yedu yanga ichigadzira zvigadzirwa zvekutanga zvepasirese nekutevedzera mutemo wehunhu kutanga. Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira mukurumbira muindastiri uye anokosha mukati mevatengi vatsva uye vekare ...
COVID-19 inokonzera kushaya simba kwebheti, Sam ...
Battery.com yakadzidza kuti Samsung SDI, b ...
Northvolt, Europe yekutanga yemo ...
Maererano nezvinoitika kunze kwenyika zvinoburitsa nhau, iyo E ...
Iko kuwedzera kwemitengo yekobalt kwadarika ...
Muchikamu chechipiri cha2020, huwandu hwese ...
Floor 5, Kuvaka 6, Dongfanghong Industrial Park, Yushi Road, guanlan, Long Hua, 518109 Shenzhen China